Dark Souls ထုတ်လုပ်သူနဲ့ပေါင်းပြီး ဗီဒီယိုဂိမ်းမိတ်ဆက်လာတဲ့ Game of Thrones ဖခင်ကြီး GRRM – Gaming Noodle
ယခုနှစ် E3 ပြပွဲကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအပြည့်ပါပဲ။ Keanu Reeves ပါဝင်တဲ့ Cyberpunk 2077 ဂိမ်းရဲ့ မိတ်ဆက် Teaser ကိုမြင်ရပြီးတဲ့နောက် အခုတစ်ခါ Game of Thrones စီးရီးရဲ့ ဖန်တီးရှင် George R.R Martin ဟာ Dark Souls ဂိမ်းတွေကို ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Fromsoftware နဲ့ပေါင်းပြီး ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်လာခဲ့ပါပြီ။
Dark Souls ရဲ့ဖန်တီးရှင် Hidetaka Miyazaki နဲ့ ဘက်ဆဲလားစာရေးဆရာကြီး G R.R. Martin တို့ ပူးပေါင်းထားတဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းရဲ့အမည်ကတော့ “Elden Ring” ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦး ပေါင်းစပ်အကြံဥာဏ်ထုတ်ထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာထဲမှာ ဆော့ကစားရမယ့် ဂိမ်းတစ်ခုပါ။
Fromsoftware ဟာ Dark Souls ဂိမ်းစီးရီးအပြင် မကြာသေးခင်က ဟော့နေတဲ့ Sekiro: Shadows Die Twice ကိုလည်း ထုတ်လုပ်ထားသူပါ။ ဒီဂိမ်းဟာ မမျှော်လင့်ထားတာတော့ မဟုတ်ဘဲ ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့ထဲက သတင်းတွေ ထွက်နေခဲ့တာပါ။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့ Xbox News ဘလော့ဂ်မှာတော့ Miyazaki မှ ဒီဂိမ်းရဲ့ အခြား FrowSoft ဂိမ်းတွေနဲ့ အဓိက ကွာခြားချက်က “Open World” စတိုင်လ် ဆော့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သီးသန့်ဆန်းပြားပြီး ကြောက်မက်ဖွယ် Boss တွေနဲ့လည်း ချရမယ်လို့ ဆိုတယ်။ Trailer ထဲမှာတော့ ထွက်ရှိရက် မပါဝင်ပေမယ့် Elden Ring ဂိမ်းဟာ Xbox One, PS4 နဲ့ PC ပလက်ဖောင်းတွေမှာ ဆော့ကစားနိုင်မှာပါ။
Ref – Kotaku
ယခုနှဈ E3 ပွပှဲကတော့ စိတျလှုပျရှားစရာအပွညျ့ပါပဲ။ Keanu Reeves ပါဝငျတဲ့ Cyberpunk 2077 ဂိမျးရဲ့ မိတျဆကျ Teaser ကိုမွငျရပွီးတဲ့နောကျ အခုတဈခါ Game of Thrones စီးရီးရဲ့ ဖနျတီးရှငျ George R.R Martin ဟာ Dark Souls ဂိမျးတှကေို ထုတျလုပျခဲ့တဲ့ Fromsoftware နဲ့ပေါငျးပွီး ဂိမျးအသဈတဈခုကို မိတျဆကျလာခဲ့ပါပွီ။
Dark Souls ရဲ့ဖနျတီးရှငျ Hidetaka Miyazaki နဲ့ ဘကျဆဲလားစာရေးဆရာကွီး G R.R. Martin တို့ ပူးပေါငျးထားတဲ့ ဗီဒီယိုဂိမျးရဲ့အမညျကတော့ “Elden Ring” ဖွဈပါတယျ။ သူတို့နှဈဦး ပေါငျးစပျအကွံဉာဏျထုတျထားတဲ့ စိတျကူးယဉျကမ်ဘာထဲမှာ ဆော့ကစားရမယျ့ ဂိမျးတဈခုပါ။
Fromsoftware ဟာ Dark Souls ဂိမျးစီးရီးအပွငျ မကွာသေးခငျက ဟော့နတေဲ့ Sekiro: Shadows Die Twice ကိုလညျး ထုတျလုပျထားသူပါ။ ဒီဂိမျးဟာ မမြှျောလငျ့ထားတာတော့ မဟုတျဘဲ ပွီးခဲ့တဲ့သောကွာနထေဲ့က သတငျးတှေ ထှကျနခေဲ့တာပါ။
မိုကျခရိုဆော့ဖျရဲ့ Xbox News ဘလော့ဂျမှာတော့ Miyazaki မှ ဒီဂိမျးရဲ့ အခွား FrowSoft ဂိမျးတှနေဲ့ အဓိက ကှာခွားခကျြက “Open World” စတိုငျလျ ဆော့ကစားရမှာဖွဈပါတယျလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သီးသနျ့ဆနျးပွားပွီး ကွောကျမကျဖှယျ Boss တှနေဲ့လညျး ခရြမယျလို့ ဆိုတယျ။ Trailer ထဲမှာတော့ ထှကျရှိရကျ မပါဝငျပမေယျ့ Elden Ring ဂိမျးဟာ Xbox One, PS4 နဲ့ PC ပလကျဖောငျးတှမှော ဆော့ကစားနိုငျမှာပါ။